Kusho "Atenolol", intengo elisezweni ububanzi $ 100 - umuthi kufakwe isigaba blocker beta1-adrenergic. Imithi has antiarrhythmic, antihypertensive, imiphumela antianginal. Umuthi kwehlisa ezishukumisayo ukwenziwa ATP futhi ikamu catecholamines, kunciphisa intracellular calcium ion ukunyakaza. Ulwelwesi eliletha ukuthula nomsebenzi eziwumgogodla sympathomimetic akuyona ejwayelekile "Atenolol" izidakamizwa. Izinkomba izindlela zihlanganisa ezivamile isifo senhliziyo. Ngosuku lokuqala ngemva kokungenisa eyashukumisela ukwehlisa okukhipha inhliziyo kungenzeka ngokubona ukwanda isiyonke izitsha ukumelana esisheshayo. Ngokuhamba kwezinsuku ezingu-1-3 kobukhulu umphumela kuyehla kancane kancane.
"Atenolol" imithi. ubufakazi
Prescribers e nomfutho wegazi ophezulu. Ukuze kuvikelwe sokuhlaselwa ka angina izidakamizwa "Atenolol" ibuye Kunconywa. Izimpawu zihlanganisa ventricular futhi itheku tachycardia, extrasystoles. Izidakamizwa siyasebenza nokuvinjelwa tachyarrhythmias supraventricular. Ngokuba nokuvimbela angina Prinzmetal imithi ayizange inikezwe.
ejenti nokushintsha kokudla nokufakwa lwemithi
I imithamo ehlukene asetshenziswa kusho "Atenolol". Izinkomba isici eliyisisekelo kule scheme isabelo ukwelashwa. Umuthi Kunconywa ukuba baphuze ngaphambi kokudla. Ngo umfutho wegazi ophakeme, impatho isiqalisile nge umthamo 50 mg. Ukuze uthole esitebeleni umphumela nomuthi reception wenziwa emasontweni 1-2. Uma kwenzeka yokukhuluma enganele umphumela hypotensive ka umthamo ukwanda ngesigamu. A nokwandisa inani izidakamizwa is hhayi Kunconywa. umthamo Angina kokuqala futhi 50 mg / d. Ngo ukungabikho nomphumela oqabulayo phakathi nesonto lokuqala ku inani imithi sinye kabili. Kwezinye izimo, umthamo kungase kukhule ku 200 mg ngosuku.
Imiphumela Side "Atenolol" kusho
Izinkomba ukusetshenziswa - akuyona into nje ukuthi kufanele kubhekwe ekwelapheni pathologies senhliziyo. Ngo kuqokwa lwemithi nokushintsha kokudla nokufakwa yimuphi kusho kudingekile ukuba acabangele amathuba nemiphumela engemihle. Njengoba umkhuba ubonisa, imiphumela emibi eliphuphile, idlule. Phakathi ukwelashwa, kungase kwenzeke ukumelwa inhliziyo, bradycardia, imakwe hypotension. Umuthi kungabangela thuthuva ubuthongo, isiyezi, paresthesia kwamalungu omzimba, Ukudlikizela, ukuba buthakathaka kwezicubu. Ezinye iziguli ukuhlanza, bronchospasm, ukucanuzela kwenhliziyo, ubuhlungu endaweni esiswini. Ngesisekelo ukwelashwa kungakusiza baba nesifo sokuntuleka kwegazi, purpura thrombocytopenic, gynecomastia, hyperlipidemia. Imithi kubangela ubuhlungu besifuba, conjunctivitis, dermatitis, urticaria, ubuhlungu emehlweni.
Hhayi-ejenti esimisiwe ukushaqeka cardiogenic, hypersensitivity, bradycardia liphinyiselwe ukugeleza ngesikhathi lactation. Sekufanele awushiye ka ethatha ngesikhathi sokukhulelwa Kumiswa ngudokotela wakho.
Amakhandlela Bheka 'bisacodyl': kanjani futhi nini ukusebenzisa?
Izidakamizwa ukuthi amasosha omzimba. Amalungiselelo futhi izindlela zokuthuthukisa amasosha omzimba
Umuthi 'Tsiprolet ". Yokusetshenziswa